Kuzivisa Njodzi yeChannel Istanbul! Yakatarisirwa Earthquake Inogona Kukanganiswa ne9-10 Severity | RayHaber
mushaTURKEYDunhu reMarmara34 IstanbulKuzivisa Njodzi yeChannel Istanbul! Inotarisirwa Earthquake Inogona Kukanganiswa ne9-10 Severity
Kuzivisa Njodzi yeChannel Istanbul! Inotarisirwa Earthquake Inogona Kukanganiswa ne9-10 Severity; Nhengo yeAccount of Science Dr. Naci Görür akataura zvinoshamisa nezve chirongwa cheKanal Istanbul. Achisimbisa njodzi ichagadzirirwa chirongwa ichi muIstanbul, Görür akati, fazla Panguva yekucherwa kwegeanizi, kuchave nekunyanyisa kunonoka, kudonha uye kudonha maererano nemamiriro epasi. Kana kudengenyeka kwenyika kuchitarisirwa kuitika, muromo weMarmara we chiteshi unokanganiswa nekuomarara kwe9-10 uye zvinokwanisika kuti ichave nekukuvara kwakanyanya.
Vachitaura kuti zvinhu zvingangoita 1-1,5 bhiriyoni m3 zvicherwa uye ecosystem, zvipfuyo nemakwenzi munzvimbo ino zvichaparadzwa zvakanyanya, Görür akati, "Pamwe maseki achaumbwa muMarmara." Tichifunga nezve yakashanda mhosva system muMarmara, iri basa richava nengozi zvakanyanya. "Panguva yekuchera chiteshi, panowanda kushomeka, kudonha uye kudonha kunoenderana nehunhu hwepasi."
"9-10 INOGONA KUKONESESWA MUVHUNDI"
Vacherekedza kudengenyeka kungangoitika muIstanbul, Görür akati, irse Kana kudengenyeka kwenyika kuchitarisirwa kuitika, muromo weMarmara weChannel uchakanganiswa nekukura kwe9-10. Zvinokwanisika kuti chimiro chine zero chisingashiviriri kune yakatwasuka uye yakatwasuka kufamba, senge Canal, inogona kukuvara zvakanyanya kubva mukudengenyeka uku (kana inotevera iyo).
Görür akaongorora chirongwa ichi maererano nemamiriro ezvekudengenyeka uye nekudengenyeka kwenyika nekugovana mepu uye kunyora zvinotevera.
1- CHINANGWA CHEMAOKO: Istanbul Bosphorus yekupa mukana wakakwana wekufamba nengarava, kudzivirira tsaona nekupa mari.
2- ROUTE: Ichacherechedzwa padyo nemupata pakati peKüçükçekmece-Terkos Lake. Ichava upamhi nekudzika kuti ngarava imwe inogona kupfuura.
3-SOIL (Geology): Iyo chiteshi ichacheka Miocene uye mudiki, inonyanya kunetsa ivhu (sediments) muKüçük Çekmece mudunhu uye ichipinda muzvikamu zveEocene-Oligocene painenge ichienda kuchamhembe. Pasi apa panoumbwa nematombo akaomesesa uye akatsetseka dombo, siltstone, sandstone uye marls. Mukova wechiteshi kune Gungwa Dema une ivhu rakaserera. Kana chiteshi ichi chakabiwa, hazvigoneki kuti:
a) Chinenge 1-1,5 bhiriyoni m3 zvinhu zvichave zvakafukurwa. Kufufutirwa kwechinhu ichi kunotora makore, michina yekuchera uye zvinoputika zvinoshandiswa, saka mupata uye nharaunda yakatenderedza mhuka, mhuka nemafuro zvichaparadzwa zvakanyanya.
b) Hazvigoneke kuisa chimedu chehukuru uku chero kupi. Pamwe, islets ichaumbwa muMarmara. Tichifunga nezve inoshanda mhosva danho muMarmara, iri basa richava nengozi zvakanyanya.
c) Munguva yekuchera kwe chiteshi, pachave nekunyanyisa kuderera, kudonha uye kudonha kunoenderana neivhu revhu.
d) Kana yakacherwa kusvika pamakungwa egungwa, chiteshi chinoita senge yekudhira mvura uye chinoparadza matangi emvura epasi pevhu kutenderera mugero uye kukonzera salinization mudunhu.
e) Dunhu riri pakati pechiteshi neBosphorus richava chitsuwa, saka nzira dzese dzekufambisa dzinoshandurwa uye dzakaoma. Kunyanya zvimisikidzwa izvo zvichapfuura pamusoro peCanal zvichave zvakanyanya nengozi uye zvinodhura nekuda kwekukwirira uye mamiriro epasi. Kupatsanurwa kwechitsuwa ichi kubva kuTrace kunogonawo kuve nenjodzi yemauto.
f) Istanbul yakamirira kudengenyeka. Kana kudengenyeka kunotarisirwa kuchiitika, muromo weMarmara weChannel uchakanganiswa nekukura kwe9-10. Chimiro chine zero chisingashiviriri kune yakatwasuka uye yakatwasuka kufamba, senge canal, inogona kukuvara zvakanyanya nekudengenyeka uku (kana imwe inotevera).
g) Sekureva kwevane masimba, pachave neguta rinenge mamirioni 3 rakatenderedza Channel. Izvi zvinowedzera njodzi yekudengenyeka. Kuwedzeredza kunoreva kurasikirwa nehupenyu uye zvinhu.
h) Iyo chiteshi ichabatanidza iyo Gungwa Dema, imwe yemakungwa akasvibiswa zvakanyanya pasi rose, uye ikozvino Marmara ari kufa. Kusvibisa kwese kwemaindasitiri kweCentral Europe kuchazadzwa kuMarmara.
I) Oceanographic system yeMarmara ichavhiringidzwa uye kushandiswa kweokisijeni mune ino gungwa kuchawedzera. Izvi zvichaita kuti mararamiro awedzere kuoma. Sezvinogona kuoneka, chirongwa chakadai chine homwe bhuti pane kudzoka. Zvakare, pachinzvimbo chechirongwa ichi icho chichaita mabhiriyoni emadhora, zvakatonyanya kukosha mabasa enyika anogona kuitwa. Nehunyanzvi hwemazuva ano, traffic muBosphorus inogona kutariswa uye kudzorwa zvakanyanya zvakachengeteka. Izvi zviri zviviri zvakachipa uye kuti nyika ibatsirwe.
Kanal Istanbul Route Mepu
Channel Istanbul Project Inosimudzira Inotarisirwa Kudengenyeka?
Ruzivo Rwakadzivirirwa Panguva Ino! Denizli-Izmir Chitima Chirongwa…
Yambiro kubva ku TMMOB: Stop Channel Istanbul Madness
CHP Mutevedzeri weIstanbul Mutevedzeri: "Ya Channel Ya Ya
Canal Istanbul, West Istanbul Island uye njodzi dzenyika
Ye 3 Yakagadzika Grand Istanbul Tunaki uye Canal Istanbul…